Ngumntu ongu-sex comedy, i-11 yabantu abadala
I-Grew inomsebenzi ongaqhelekanga kwihlabathi, yinto ekhangayo ye-worldin classin. Ukubukela i-porno engathandekiyo kwi-intanethi yinto elula kakhulu, uya kuqonda! Ukuthatha isicwangciso sokubanjwa kwenyanga, ingozi uGrew ikhuphisana neentshaba, kwaye wabetha namantombazana amathathu athandekayo. Iintsana zokurhweba iibhisikidi ngandlela-thile zigcina indawo yazo yokuhlala. Ubaba owamkelayo uyabathwala kunye neenkukhu.
eyona > Abantu abadala > Ngomntu
Ukubukela Kwi-Intanethi: I-Ugly ndi-porn ngefowuni
Iikhathuni ze2 ezimbi
1 Ugly Ndiyingozi
2 Ugly 2
3 Imifanekiso ye-3 eyi-Ugly
Kwaye uye wakwazi ukubukela i-porno engathandekiyo i-2 kubantu abadala? Uya kugxinwa ibali elimangalisayo. Grew, owaziwa ngokuba yinkosi yamasela, amaphupha okuba yimbali. Uhamba ukuphanga, uthathe inyanga. Ngaphandle kwesixhobo esikhethekileyo, icebo liya kuphelelwa, kwaye i-villain iya kudala ukutsala isixhobo. Ekhungathekile, uGrew waphawula, iVeksi yavula iingcango zendlu ephathekayo kwintombazana ezintathu zeenkedama ezithengisa iikiki. Ubuhle budume ngokuba kungabhinxi i-panties, kwaye uGrew wayazi oku.
Imifanekiso ye-3 eyiyo
Grew, owathanda ieskese, uzimisele ukudibanisa ishishini kunye nolonwabo. Isicwangciso sobuqili sobuhle siya kunceda ukuphumeza. Xa benandipha abancinci, i-villain iya kuba nokufikelela kuzo zonke iilekese kunye nama-pussies amahle. U-Grew wayevakalelwa kukuba ukukhanukela kwakhe kwakulivusa, mhlawumbi wayengafuni? Umzimba nomphefumlo weGrew usemncinci, ugcwele amandla, kufuneka uthululwe, kunye namantombazana aya kumnceda! Jonga i-cartoon engathandekiyo I-3 i-porn adult abadala ukuba banandiphe umdlalo opholileyo kunye neengcamango ze-pervert ezamkela iikiti.